एसईई उत्तीर्ण २ लाख विद्यार्थीलाई समस्या, कक्षा ११ मा भर्ना पाउन नै कठिन !
प्रकाशित मिति: June 24,2018
१० असार - ०७४ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । एसइईमा २५ विद्यार्थीले सबैभन्दा माथिल्लो जिपिए ४.० ल्याएका छन् । आठवटै विषयमा ९० भन्दा माथि १०० सम्म ल्याउने विद्यार्थीले मात्र जिपिए ४ पाउँछन् ।
यस वर्ष साधारणधारतर्फ नियमित चार लाख ५१ हजार पाँच सय ३२ र एक्जाम्टेडतर्फ २५ हजार एक सय ३२ परीक्षामा सहभागी थिए । त्यसैगरी प्राविधिकतर्फ नियमितमा आठ हजार नौ सय ६ र एक्जाम्टेडतर्फ १० जना सहभागी भएका थिए ।
माथिल्लो कक्षाका लागि भर्ना पाउन कठिन हुने विद्यार्थी संख्या झन्डै दुई लाख छ । नियमिततर्फ कुल चार लाख ५१ हजार पाँच सय ३२ रहेकामा जिपिए २.० भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी एक लाख ९५ हजार तीन सय १५ छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले झन्डै ४५ प्रतिशतको शैक्षिक स्तर कमजार रहेको र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
कटारी अस्पतालमै प्रसुति शल्यक्रिया शुचारु
कटारी नगरले सम्बोधन गरेन : आदिवासी जनजातीको गुनासो
पाँचथर हत्याकाण्डमा डरलाग्दो रहस्य, ९ शवको आज अन्त्यष्टी गरियो, प्रहरीमाथि नै आरोप (भिडियो सहित)
पाँचथर हत्याकाण्ड विभत्स हत्यामा ज्यान गुमाएका ९ जनाको बिहिबार अन्त्येष्टि गरिदैं
चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउन दुबै देश एक भए पनि धेरै कुरा टुंगो लाग्न बाँकि